May 8, 2022 - Online Hartha
သင်ဝယ်ထားတဲ့ကားဟာ အော်ရီဂျင်နယ် ကားမှန် ဟုတ်/မဟုတ် ဘယ်လိုစစ်ရမလဲ
May 8, 2022 by Online Hartha
သင်ဝယ်ထားတဲ့ကားဟာ အော်ရီဂျင်နယ် ကားမှန် ဟုတ်/မဟုတ် ဘယ်လိုစစ်ရမလဲ ကဲဒီတစ်ခါ မှာတော့ ကားမှန်တွေဘက်ကို လှည့်ရအောင်။ ကားတစ်စီးမှာဆိုရင် ကားမှန်တွေကလည်း အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကားမှန်တွေရဲ့ သဘောတရားတွေနဲ့ original မှန် ဟုတ်/မဟုတ်၊ ကားတိုက်ထားလို့ မှန်လဲထားဖူးလား၊ မှန်လဲထားတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာရော တိုက်ရာခိုက်ရာ ရှိလား စသဖြင့် အကြမ်းဖျင်း သတိထားရအောင်ပါ။ Original ကားမှန်တွေမှာပါတဲ့ အချက်တွေဟာ brand တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တူညီကြတဲ့ အချက်တွေရှိသလို၊ မတူတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် original ကားမှန်တွေမှာ ကားထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ စာတန်းပါပါတယ်။ Toyota ဆိုရင် ပုံမှာပါတဲ့အတိုင်း Toyotaစာတန်းလေးပါပါတယ်။ တရုပ်ကား BYD ဆိုရင်လည်း BYD စာတန်းပါပါတယ်။ နောက်ထည့်တဲ့မှန်တွေ ကွဲသွားလို့ အသစ်လဲလိုက်တဲ့မှန်တွေမှာတော့ ဒီစာတန်းတွေပါမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သတိပြုစရာလေးတစ်ခုကတော့ … Read more
နွားချေးကို အကျိုးအာနိသင်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုသုံးသင့်သလဲ ?
နွားချေးကို အကျိုးအာနိသင်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုသုံးသင့်သလဲ ? နွားချေးသည် နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်များစွာပါပြီး အပင်ရဲ့ အရွက်ပိုင်းကို အားပေးပါတယ်… ဒီဓာတ်ကိုအဓိကထားပြီး လိုချင်တယ်ဆိုရင် နွားချေး အစိုကိုသုံးမှ နွားချေးမှာပါတဲ့ နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်… အစိုသုံးပါက ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အားနည်းချက်ကတော့ အပင်ရဲ့ အမြစ်အပူလောင်ခြင်းနဲ့ ပိုး ပြသနာဘဲဖြစ်ပါတယ်… ရေစိမ်ပြီး ရေဖျန်းသုံးခြင်းနဲ့ ပါးပါးဖြူးပြီးသုံးခြင်း မြေနဲ့ရောမွေပြီး သုံးခြင်းဖြစ် ပိုထိရောက်စေပါတယ်… အခြောက်သုံးပါက နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ် များစွာရော့နည်းသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်… သို့ပေမယ့် နွားချေးမှာပါတဲ့ မကောင်းတဲ့ဘတ်တီးရီးယားတွေကင်းစင်မယ် ပိုးဖြစ်နိုင်မှူ့ကင်းစေမယ်… အပူလောင်မှူ့တွေကင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်… နိုက်ထရိုဂျင် မရှိသလောက်ဖြစ်ပေမယ့် အခြားအဟာရတွေကျန်ရှိစေပါတယ်… အလားတူ ချေးခြောက်အဖက်များမှာ မြေသြဇာဖြစ်စေပြီး မြေကိုပွစေသည့်အပြင် မြေမှ အခြားအဟာရများ အစိုဓာတ်ကိုပါ ထောက်ပံ့ ထိန်းသိမ်းနိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်…။ နွားချေးကိုနှပ်သုံးခြင်း ရေစိမ်သုံးခြင်း မြေဆွေးနှင့်ရောသုံးခြင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်….။ Minthikeစိုက်ပျိုးရေးအသိပညာ Credit … Read more
အသက် (၂၀)နဲ့ (၃၀) ကြားထဲမှာ ချမ်းသာလာဖို့လျှို့ဝှက်ချက် (၇) ခု
အသက် (၂၀) နဲ့ (၃၀) ကြားထဲမှာ ချမ်းသာလာဖို့လျှို့ဝှက်ချက် (၇) ခု ကျွန်တော်တို့အားလုံးချမ်းသာချင်ကြတယ်။ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း ချမ်းသာချင်မှာအသေအချာပါပဲ၊ အထူးသဖြင့် ငယ်စဉ် ၂၀ နဲ့ ၃၀ကြားလောက်မှာ ချမ်းသာရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ချမ်းသာဖို့ဆိုတာလည်း ဒီနေ့လုပ် ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့အရာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ငယ်တုန်းမှာ ကြိုးစားတာပိုကောင်းပါတယ်။ အသက် ၂၀ကနေ ၃၀ ကြားမှာ ချမ်းသာချင်ရင်တော့ အောက်ပါအချက်လေးတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်….။ (၁) နေ့ရွှေ့ညရွှေ့လုပ်နေခြင်းကို ရပ်တန်းကရပ်ပါ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ လူတွေတွေးလေ့ရှိတာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ မနက်ဖြန်မှလုပ်မယ်၊ နောက်မှလုပ်မယ် ဆိုတာပါပဲ။ အချိန်တွေ အများကြီးရှိတယ်လို့ပဲ ယူဆနေပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒိအချိန်တွေ တဖြည်းဖြည်း ကုန်ဆုံးလာပြီးအသက်တွေ ကြီးမှာ နောင်တရ လာတတ်ကြ ပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲ့ဒိမနက်ဖြန်ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေကြီးကိုသာ … Read more